९ / ११ का आक्रमणहरू: अल कायदालाई के भयो?::Jalpa Khabar
९ / ११ का आक्रमणहरू: अल कायदालाई के भयो?
Published on: २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०२:२३
अमेरिकामा ९ / ११ को आक्रमणको १९अाैं वार्षिकोत्सवमा, अपराधी – तत्कालीन अफगानमा आधारित जिहादी समूह अलकायदा विचलित भएको अवस्थामा छ।
सिरियामा यसको शाखालाई प्रतिस्पर्धी शक्तिले जूनमा मौन बनायो; अमेरिकी ड्रोन हमलामा नेता गुमाएको केही बेरपछि यमनमा विद्रोहीहरूको हातबाट हार भयो। र उत्तर अफ्रिकी शाखाका नेता मालीमा जुनमा फ्रान्सेली आक्रमणमा मारिए र त्यसका उत्तराधिकारीको नाम भने अझै आएको छैन।
यसैबीच, अल कायदाका नेता, एमान अल-जवाहिरी महिनौंसम्म अप्रत्याशित रूपमा अनुपस्थित थिए, जसले आफू मरे वा असक्षम भएको अनुमान लगाईरहेको थियो।
तर अल कायदाको अफ्रिका शाखाहरू, सोमालिया र मालीमा, एक शक्तिशाली शक्ति बनेको छ।
वैचारिक हिसाबले, अल कायदाले जिहादी आन्दोलनको लागि एक परिचित दुविधाको सामना गर्दछ: आधुनिक मुस्लिमलाई जित्नको लागि लचिलोपन देखाउन र मूलतः बाँच्न; वा कडा जिहादी सिद्धान्तहरू र मुस्लिम जोखिममा अड्किएर बस्नुहोस्।
प्रत्येक मार्गमा यसको जोखिम हुन्छ।
पहिलोले समूहको जिहादी प्रमाणिकतालाई खतरामा पार्न सक्थ्यो र कट्टरपन्थीहरूले विभाजन र विच्छेदन गर्न सक्थ्यो, जबकि दोस्रोले समुहको निधनको बिन्दुसम्म पनि परिचालन क्षमता सीमित गर्न सक्दछ।
सिरियामा अल कायदा – जसको प्रतिनिधित्व यसको अनघोषित शाखा हुर्रस अल-दीनद्वारा गरिएको थियो – उनी भित्र जान सकेनन। यो आंशिक रूपमा एकातिर जिहादी प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो, र अर्कोतर्फ अमेरिकाको नेतृत्वमा गठबन्धनले अलकायदाका अधिकारीहरूको चील आँखा राखेको निगरानी।
यो समूह भूमिमा लोकप्रिय पनि छैन किनकि सिरियालीहरूले अल कायदाको ब्रान्डलाई सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यका लागि खतरा र चुम्बकको रूपमा हेरेका छन्।
धेरै बर्ष जासूसहरूले समूहमा घुसपैठ गरे र त्यसको नेतृत्वको तथ्यांकको सही लक्ष्यलाई सहजीकरण गरे।
यो पनि आन्तरिक डिभिजन द्वारा अाधारित छ।
तर यस वर्ष एक घटनाले देखायो कि एक्युएपीले अझै यस्तो भूमिका खेल्दै आएको छ जसको लागि यो पहिले डरलाग्दो थियोः पश्चिममा “एक्लो ब्वाँसो” आक्रमणहरू।
फेब्रुअरीमा, उक्त समूहले गत डिसेम्बरमा फ्लोरिडाको पेन्साकोला नौसैनिक अड्डेमा भएको सशस्त्र सेनाको सउदी सेनाका प्रशिक्षक मोहम्मद अलशामरानीले गरेको गोलीबारीको पछाडि भएको भन्यो। यो कुरा पछि अमेरिकाले पुष्टि गर्यो।
फ्रान्चाइजीको कम सक्रिय शाखामध्ये एक रहेको इस्लामिक मघरेब (एक्यूआईएम) मा अल कायदाले जूनको शुरुमा मालीमा फ्रान्सेली आक्रमणमा अल्जेरियाली नेता गुमायो।
तीन महिना पछि, समूहले एक उत्तराधिकारीको नाम लिइसकेको छ।
यो स्पष्ट छैन किन, तर – कारण जेसुकै होस् – खाली नेतृत्व पोष्टले समूहमा राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दैन।
१९९० को दशकमा अतिवादी चरमपन्थी सशस्त्र इस्लामिक ग्रुप (जीआईए) द्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको जिहादीहरूको कुख्यात सम्पदालाई ध्यानमा राखेर अल्जेरिया र उत्तर अफ्रिका अझ व्यापक रूपमा कडा बनेको छ जुन धेरै अल्जेरियन नागरिकहरूको मृत्युको लागि जिम्मेवार थियो।
माली केन्द्रित जमात नुसरत अल इस्लाम वाल-मुस्लिमिन (जेएनआईएम), जुन बुर्किना फासो र कहिलेकाँही नाइजरमा पनि सञ्चालन गर्दछ, मार्च २०१७ मा स्थापित भएको थियो।
अल शबाब पछि – सोमालियामा एक अल कायदा सम्बद्ध – JNIM दोस्रो सबैभन्दा सक्रिय अल कायदा शाखा हो।
जेएनआईएमको आक्रमण प्रायः स्थानीय सैनिक र विदेशी सेनामा केन्द्रित छ, धेरै जसो फ्रान्सेली सहेलमा छन्।
तर पछिल्ला महिनाहरुमा, यो इस्लामिक स्टेट (IS) समूहको बिरूद्ध लडाई द्वारा छेउछाउमा भएको देखिन्छ।
फेब्रुअरीमा, जेएनआईएमले मालीको सरकारसँग वार्ता गर्न तत्परता देखाए तर अगस्टमा सरकारको पतन र कुपनबाट नयाँ व्यक्तिको आगमन भएपछि जेएनआईएमको भाग्य र अर्को चरण अस्पष्ट छ।
यरूशलेममा ध्यान दिनुहोस्
अल-शाबाब निस्सन्देह अल कायदाको सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा ठूलो खतरा हो।
यो समूहले इलाका समात्छ र मध्य र दक्षिणी सोमालियाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रहरूमा शासनको एक प्रकारको अभ्यास गर्दछ।
थप रूपमा, अल-शाबाबले सोलिलिया र कहिलेकाँही छिमेकी केन्यामा दैनिक आक्रमणहरू र लगातार उच्च प्रोफाइल अपरेशनहरू दावी गर्दछन्।
यस बर्षका ठूला अपरेसनहरूमध्ये केन्याको युएस मन्डा खाडी सैन्य अड्डामा जनवरीमा गरिएको आक्रमण हो, जसले तीन अमेरिकीलाई मरे र थुप्रै विमानहरू ध्वस्त पारे। हालसालै, अगस्तमा, अल-शबाबले मोगादिशुमा सरकारी अधिकारीहरू द्वारा समुद्रीतट होटलमा आक्रमण गरे र एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरे।
अल-शाबाब र जेएनआईएमले ठूला हमलाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अल कायदाले २०१९ मा आफ्नो विश्वव्यापी जेरूसलम केन्द्रित सैन्य र प्रचार अभियानको आरम्भ गरेको थियो, जुन २०२० मा दोहोरिएको थियो, “प्यालेस्टाइनको मुक्ति” लाई आफ्नो निर्धारित लक्ष्यको रूपमा औंल्याइएको छ र अमेरिकालाई यसको रुपमा स्थापित गरेको छ। चलिरहेको नम्बर एक दुश्मन।
अमेरिका को लागी सन्देश
मे काे एक भिडियोमा अल कायदाका नेता इमान अल जवाहिरीले यस बर्षमा एउटा मात्र उपस्थित भएको छ।
त्योभन्दा एक महिना अघि आईएसका समर्थकहरूले अनुमान लगाए कि अल-जवाहिरी या त मरेका थिए वा स्ट्रोकको सिकार भएका थिए र असक्षम भए। नयाँ भिडियोमा देखा पर्न वा मुख्य घटनाहरूमा व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न उसको असफलतामा उनीहरूले यो आधारित छ।
अल कायदाका केन्द्रीय कमांड अधिकारीहरूमध्ये धेरैजना विगत वर्षहरूमा अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्रमा मरेका थिए वा सिरियामा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिएका थिए।
अमेरिका-तालिबान शान्ति सम्झौताले फेब्रुअरीमा हस्ताक्षर गर्‍यो, जसमा यो जनाइएको छ कि उग्रवादी समूहले कुनै पनि वैश्विक जिहादी संगठनलाई आश्रय दिनेछैन, अलकायदाका अधिकारीहरूलाई त्यहाँ सुरक्षित ठाउँ भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ।
अल-कायदाले यसै बीचमा, अमेरिका विरोधी सरकारको सन्देशको समर्थन प्राप्त गर्न अमेरिकामा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कट र जाति प्रतिरोधको शोषण गर्न कोसिस गरेको छ।
यस समूहले सामान्यतया पश्चिमी जनतालाई र विशेष गरी अमेरिकाका मानिसहरूलाई सम्बोधन गरे कि उनीहरूको सरकार महामारीको बेलामा उनीहरूलाई सहयोग गर्न असफल भएको थियो र अमेरिकामा अफ्रिकी अमेरिकीहरूसँग गरिएको “जातीय” व्यवहार सशस्त्र संघर्षबाट मात्र उल्टाउन सकिन्छ।
तर यो शङ्कास्पद छ कि अमेरिकी भूमिमा सबैभन्दा ठूलो आतंकवादी हमलाका लागि जिम्मेवार समूहले यस्तो सन्देश पठाएको छ भने अमेरिकी जनतामा पनि यसले गुन्जाउनेछ।